‘खुल्लामञ्चमा पाँच हजार मानिस मा’रेको स्वीकार्नेलाई जे’ल किन नहाल्ने ?: भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहि…हेर्नुहोस!
काठमाडौ। ज्ञानेन्द्र शाही सुशासनका विषयमा खबरदारी गर्छन । नेताहरुले देश व्यवस्थापन गर्न नसकेको संगीन आरोप लगाउँछन । गणतन्त्रले नेता, कार्यकर्तालाई रोजगारी दिए पनि मुलुकका लागि अभिषाप बनेको शाहीको बुझाइ छ । उनी भन्छन– ‘प्रधानमन्त्रीको काम आफ्ना आठ लाख भेडे, झोले कार्यकर्तालाई पोस्नु हो । त्यसबाहेक जनतालाई प्रत्याभूति हुने कुनै काम हुन सकेको छैन ।’
सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको बुझाइमा सत्ता र शक्ति दाहिना भएपछि नियम कानुन मान्नु पर्दैन । यहाँ हुनेखाने र हुँदाखानेलाई फरक फरक नियम कानुन लाग्छ । उनको प्रश्न छ– ‘खुल्लामञ्चमा पाँच हजार मानिस मा’रेको स्वीकार्नेलाई जे’ल किन नहाल्ने ? अरु सर्वसाधारणले यही स्वीकारोक्ति गरेको स्थितिमा तिनीहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ ? सम्झौताले संविधानमाथि राज गर्न मिल्छ ?’
आ’लोच’कहरु भन्छन– ज्ञानेन्द्र शाही नेपालको संक्रमणकाली राजनीतिका एउटा गुरिल्ला मार्केटिङ गर्ने व्यक्ति हुन । जो बजारमा खपत हुने विषयमा आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्छन । जो कर्तव्यभन्दा पनि नारामा आफ्नो भविष्य देख्छन् । तर शाही आफूले नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरेको बताउँछन् । ज्ञानेन्द्र शाही अमेरिकी अनुदान एमसीसी स्वीकार्नु हुन्न भन्ने मान्यता राख्छन् ।